KTO-USA: မြစ်ကြီးနား -ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီ လမ်းပိုင်းသို့ မြန်မာအစိုးရတပ် စစ်ကြောင်းထိုး
Posted by Admin Tuesday, November 8, 2011
Lachid Kachin and 19 others like this.
Burma Thwe သတင်းတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲဗျို့..။ ရှယ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Michael Jiang တော်တော်ဆိုးဝါးတယ်ကွာ....လိုင်ဇာလမ်းကောကန်ပိုင်တီလမ်းပါပိတ်လိုက်တော့လူတော်တော်များများဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ....ကြည့်လုပ်အုံး
May Thingyan Hein သတင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။
Myint Zu စစ်ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ အဲ့ဒေသမှာရှိကြသူတွေအကုန်လုံးဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါဆင်းရဲကြတော့မှာပေါ့။
Michael Jiang အစကတော့ကန်ပိုင်တီလမ်းပေါက်တော့အသက်ရှူချောင်သေးတယ်..အခုတော့တရုတ်ပြည်သွားတဲ့လမ်းအကုန်ပိတ်လိုက်တော့သေရောပေါ့
Michael Jiang သူခိုး၊ဓားပြတွေပိုပေါလာမှာတော့အသေအချာပဲ...
Myint Zu အားလုံးသောလူအပေါင်းချမ်းသာခြင်းသုခ အမြန်ရရှိနိုင်ကြပါစေရှင်။
Deeram Rapma sniper ဆယ် ရောက် လောက် နဲ့ ချိန် ပြစ် လိုက် ရ မှာ..အ ခုလို တက် လာ တဲ့ ချိန် ပေါ့...................ဘာပဲ ဖြစ့်ဖြစ် KIA အ နိူင် ရ ပါ စေ..ဘုရား ကာကွယ်ပါ စေ..
Ninghkrin Shareshagan လားတွေနဲ့ဆန်အိတ်တင်သွားတာကတော့ စစ်တိုက်သွားတာနဲ့ကိုမတုတာ.. KIA တွေ စစ်တိုက်သွားတာက ဓါးမတချောင်းတဲ့ တောထဲထွက်လိုက်ရင် စားချင်တာ အကုန် ရ တာ၊ ကွာ ပါ့၊
Ninghkrin Shareshagan နိုဝင်ဘာ(၆-၇)နှစ်ရက်ဆက်ကာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွား ပြီး အစိုးရတပ် ဝိုင်း ခံထား နေ ရ ပါ တယ်..ပဲခုးကတပ် ဆို တော့ နမော်နမဲ့နဲ့ အပြတ် ခံနေရတယ်၊
Kyaw Swa Hein Thanks for the news.
Rstarry Shan ဖတ်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူး၊ အဲဒီကအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက် ရင်လေးတယ်ရှင်။
Ag Myint Tham သတင်းအတွက်ကျေးဇူးပါ။ ရှယ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
Clapping Crab သတင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ko Phyo သတင်းအတွက်ကျေးဇူးပါ။ ရှယ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ
Sai Ko သတင်းအတွက်ကျေးဇူးအထူးပါ။
ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ စိတ်ထိခိုက်စေတယ်။ တိုင်းရင်းသားအတွှေ အချင်းချင်းလည်း ယုံကြည်မှုရိပါတယ်။ ခုလို တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို ကျမ လေးစားမှု ရှိပါတယ်။ သူတို့သာ ကြံကြံ့ခံပြီး မကွာကွယ်ခဲရင် ကချင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်ပြည်အောက် စုံးစုံးမြှုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်မှာပေါ့။ ကချင်အဖွဲ့တွေ ရှိလို့သာ ဧရာဝတီဟာ ခုလောက်ကျန်ရတာပါ။ ကျမ စိတ်ပျက်မိတာက ခုချိန်ထိ တိုင်းရင်းသားရေးအတွက် နည်းနည်းမှ ထည့်မစဉ်းစားတဲ့သူတွေကိုပါ။ လက်နက်ကိုင်ြီ့ပီး တိုက်မှ ဖြစ်မယ့် အခြေအနေမှာ တိုက်ကြရတာကို နားလည်ပါတယ်။ အဲဒီလို နည်းလမ်းမဟုတ်တဲ့ တခြားနည်းလမ်းများ ရှိရင် ဖြစ်စေချင်မိတာပါရှင်။ ဒေသခံတွေ အထိနာလွန်းလို့ပါရှင်။
Khun Saing ရှယ်သွားပါတယ်။ သတင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။ သေချာတာ ဒီစစ်ဟာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ တရားသော စစ် မဟုတ်တာပါပဲ
Sai Thein Win အစိုးရကသာ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ခုခံတော်လှန်သူတွေလဲ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ.. ပြည်နယ်တွေက လက်မခံပဲနဲ့ အစိုးရဝင်လုပ်ချင်လို့ တိုက်တဲ့စစ်ကလဲ ကျူးကျော်စစ်ပဲဖြစ်တော့မပေါ့..
Copyright 2009 : KTO-USA: မြစ်ကြီးနား -ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီ လမ်းပိုင်းသို့ မြန်မာအစိုးရတပ် စစ်ကြောင်းထိုး Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com